ईम्यानुएल Frimpong - एक Ghanaian फुटबल खेलाडी टुला "शस्त्रागार" को क्षण लागि हाल खेल्छ जो। यो वर्ष, उहाँले आफ्नो क्यारियर बस मात्र शुरू भएको छ भनेर, वर्ष मात्र 24 थियो। ईम्यानुएल Frimpong को मिडफिल्डर मा कार्य हो, तर केन्द्रीय देखि midfield आक्रमण गर्न क्षेत्र को बीचमा कुनै पनि स्थिति कब्जा गर्न सक्छ।
ईम्यानुएल Frimpong, घाना मा जन्म भएको थियो जनवरी 10, 1992 तथापि अझै पनि एउटा सानो बच्चा, आफ्नो परिवार संग इङ्गल्याण्ड गर्न, सही राजधानी शहर मा सारियो गर्दा - लन्डन। त्यहाँ जवान प्रतिभा छ र समय देशमा बलियो क्लब मध्ये एक मा स्थानीय "शस्त्रागार" देखे। 2001 मा, नौ वर्ष ईम्यानुएल क्लब सिस्टम सामेल र पाँच वर्ष पछि पनि फुटबल क्यारियर मा ध्यान बाहिर घट्यो। उहाँले अठार वर्षको हुँदा 2010, मा, त्यो एक पेशेवर सम्झौता, उहाँले खुसीसाथ हस्ताक्षर जो प्रस्ताव थियो। तर, खेलाडी को आधार मा स्थान फेला परेन छ, त्यसैले लगभग तुरुन्त ईम्यानुएल Frimpong भाडामा मा जान थाले। मौसम 11/12 मा उहाँले "शस्त्रागार" धेरै 14 को रूपमा खेल खर्च, तर सधैं बाहिर उहाँले अनुभव हासिल गर्न सक्छन् कि, "ब्वाँसा" उसलाई पठाउन निर्णय थियो त, विस्थापन गर्न छोटकरीमा आए। तर त्यहाँ एक जवान Ghanaian बस पाँच खेल प्ले छ। उहाँले "शस्त्रागार" फर्के, त्यो क्षेत्र मा "फुलहम" मा दुई पटक थप भयो, र त्यसपछि "Charlton" मा फिर्ता भाडा गए यो समय र त्यसपछि। को क्लब ईम्यानुएल आधा एक वर्ष बिताए प्रत्येक, छ मिलान प्ले भएको। 2013 को गर्मी गरेर Frimpong को "शस्त्रागार" मा कुनै भविष्य छ, त्यसैले पनि छ महिना पछि, Ghanaian "Barnsley" मा 250 हजार यूरो लागि बेचिएको थियो स्पष्ट भयो।
को "Barnsley" गर्न संक्रमण
ईम्यानुएल Frimpong - मिडफिल्डर, धेरै वर्ष पहिले त्यो दुर्भाग्य, छैन बाँच्न गर्नुभयो उच्च आशा थियो जो। "Barnsley" मा एक पटक, त्यो छ महिना सबै नौ खेल मा, जुन बेलामा अल्पकालीन सम्झौता नवीकरण गर्न अस्वीकार कि नेतृत्व विश्वस्त गर्न असफल भयो बिताए। फलस्वरूप, सेप्टेम्बर Frimpong पहिलो निःशुल्क एजेन्ट को स्थिति मा रूसी क्लब "ऊफा" सारियो।
रूस मा सार्ने
को "ऊफा" प्लेयर सबै काम गर्दैन बाहिर - पाठ्यक्रम, उहाँले दुई वर्ष मा 28 खेल खेले, तर तिनीहरूलाई केही उहाँले फुटबल महासंघ को चार्टर को एक उल्लङ्घन हो जो एक पर्यटक भिसा, मा गर्दा खर्च एकै समयमा। यसबाहेक, उहाँले फ्यानहरूसँग अश्लील इशारा लागि अयोग्य भएको थियो, र फलस्वरूप, अप्रिल 2016 मा आफ्नो सम्झौता समाप्त भएको थियो। अगस्ट मा, दुई वर्ष सम्झौता Ganz टुला प्लेयर हाल आयोजित छ जसको लागि चार खेलमा "शस्त्रागार", हस्ताक्षर गरे।
राष्ट्रिय टोलीका लागि प्रदर्शन
आफ्नो युवावस्थामा, Frimpong ठूलो प्रतिभा छलफल, त्यसैले इङ्गल्याण्ड को युवा धेरै कल प्राप्त भएको थियो। तर वयस्क कल उहाँले प्रतीक्षा भएन, त्यसैले उसले मार्च 2013 मा घाना लागि आफ्नो debut गरे - क्षणमा नै खेल आफ्नो अन्तिम हो।
Guram Adzhoev - को Kharkov "Metalist" को दिग्गज फुटबल खेलाडी
फुटबल मा सबै भन्दा ठूलो बिल। चलानी अवलोकन
"बार्सिलोना" को कोच: स्पेन मा सबै भन्दा शीर्षक क्लब को एक को सबै भन्दा प्रसिद्ध नेताहरूले
Maksim Maksimov (फुटबल खेलाडी): रूसी स्ट्राइकर लिथुनियन् क्लब "Atlantas"
सबैभन्दा आकर्षक र सबैभन्दा सुन्दर प्रेमिका पत्नी footballers
Shay दिइएको - लिजेन्ड गोल रक्षक दोकान
सामान्य Antonov Aleksey Innokentevich: जीवनी, शोषण
चार रंग आँखा छाया "एवन": समीक्षाएँ दुकानदारों
बाहिर प्राप्त गर्न कसरी "Instagramm": कसरी एक मोबाइल उपकरण, ट्याब्लेट र कम्प्युटरमा आफ्नो खाता छोड्ने
Nefteyugansk, जनसंख्या: प्रशस्त, वितरण, रोजगारी
3 वर्ष को बच्चा संग के गर्न?3वर्ष को लागि बच्चाहरु खेल। बच्चाहरु को लागि पुस्तक
Improvisation - शब्द को यो अर्थ ...
तपाईंको बजेट के छ?
Keratin कपाल सीधा कसरी राख्छ? keratin सीधा पछि शैम्पू
विश्राम लागि एक ठाउँ र एकाटेरिनबर्ग मा राम्रो रहन - "Elixir पल्ट"। संस्थाहरु को एक सिंहावलोकन